ဈေးပေါပေါနဲ့ မြန်မာပြည်ထဲ တစိမ့်စိမ့်စီးဝင်ပြီး ကြီးထွားလာနေတဲ့ တရားမဝင် တရုတ်ဘီယာဈေးကွက် – Zartiman
တရုတ်ကတော့ မြန်မာပြည်သားတွေကို ဇီးရိုးဘတ်ဂျက်တိုး၊ တစ်ရှူးငှက်ပျောကိစ္စများနည်းတူ အခုတခါလည်း ရိုးသားသော ကျေးလက် က တိုင်းရင်းသားများကို နွားမရွှံ့ပိတ်ဘီယာတံဆိပ် ကပ်ထားသည့်အရည်များကို ထိုးရောင်းနေကြလေပြီ။ မည်သည့်ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားမှန်းမသိသည့်အရည်များကို သောက်သုံးနေကြပါပြီ။ နောင်သုံးလေးနှစ်ကြာသောခါ အမျိုးအမည်မသိ ဘယ်လိုရောဂါဆန်း တွေ ခံစားကြရဦးမလဲဟု စဉ်းစား နေမိပါသည်။ဘီယာတဘူး ၅ဝဝ ကျပ် ‘ဖောက် . . . ရှူး . . .”ကွင်းချိတ်အောက်မှာ “Free Beer” ဒါသည် ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒဇောနဲ့ အိပ်မက်မက်နေခြင်း မဟုတ်။
မြန်မာပြည်အရှေ့တလွှားမှာ အမှန်တကယ် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာတွေ ဖြစ်ပေါ်နေပါပြီ။ဘီယာတဘူးကိုမှ ငါးရာကျပ်ပဲပေး ရတဲ့အပြင် တဘူးသောက် တဘူးပေါက်ကံစမ်းမဲတွေ ဗုံးပေါ လအောပေးနေတယ်ဆို စာဖတ်သူယုံချင်မှယုံပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် ဒီစာကို အချိန် ၅ မိနစ်ပေးပြီး အဆုံးထိဖတ်ကြည့်ပါ။တောင်ကြီးမြို့နှင့်အနီးတဝိုက်တွင် ဆင်နှင့် နဂါးတို့ အပေါင်းအပါတစုနှင့်အတူ သောင်းကျန်း ချင် တိုင်း သောင်းကျန်းနေကြသည်ဟု မိတ်ဆွေတဦးက ဖုန်းဆက်ပြီးပြောတော့ အံအားသင့်ခဲ့ရသည်။ ဆင်နှင့်နဂါးဆိုသည်မှာ တိရစ္ဆာန်များကို ဆို လိုခြင်းမဟုတ်ဘဲ တရုတ်ပြည်မှတရားမဝင် ဝင်ရောက်လာ သည့်ဘီယာများကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ် ကြောင်း မိတ်ဆွေဖြစ်သူက ရှင်းပြသည်။
ကွင်းဆင်း လေ့လာခဲ့ရာတွင် တောင်ကြီးမြို့နှင့် အနီးတဝိုက်မြို့နယ် များဖြစ် သည့် ကလော၊ အောင်ပန်း၊ ညောင်ရွှေ၊ ရပ် စောက်၊ ဟိုပုံး၊ ဖယ်ခုံ၊ မိုးဗြဲမြို့နယ်များအထိ တရုတ်ဘက်မှဝင်လာသည့် အမျိုးအမည်မသိ ဘီ ယာများ ပျံ့နှံ့ နေသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။ ဘူးများပေါ်တွင် တံဆိပ်အမျိုးမျိုး၊ ဆင်၊ ခြင်္သေ့၊ နဂါး တိရစ္ဆာန်ရုပ်ပုံ အမျိုးမျိုး ပါရှိသဖြင့် ဒေ သ ခံများက ဆင်၊ နဂါး စသဖြင့် အလွယ်ခေါ်ကြသလို တ ဘူးကို ၅ဝဝ ကျပ်သာပေးရသဖြင့် ။အချို့ကလည်း ”ငါးရာတန်ဘီယာ”ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။ ထို တရားမဝင်ဘီယာများသည် တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ကိုဖြတ်၍ တောင်ကြီးမြို့ အထိ ၁၂ ဘီးကားကြီး များဖြင့်ရောက်ရှိလာပြီး ။
ဒေသတွင်းဖြန့်ချိခြင်းကို လက်ခံဒိုင်နှစ်ဦး၊ သုံးဦးက လုပ်ကိုင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။’အခုဆိုရင် ဒီတရားမဝင် တရုတ်ဘီယာတွေက တော်တော် လေးပျံ့နေပြီ။ ၁၂ ဘီးကားတွေနဲ့ ပေါ်တင်သယ်နေကြတာ။ ၁၂ ဘီးကားတစီးကို ဖာ ၂၂ဝဝ လောက်ပါတယ်။ တောင်ကြီးမြို့မှာကို ဆိုင်ရှေ့ တွေမှာ ဒီအတိုင်းပုံထားတဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေပြီ။ ရွာဘက်ကလူတွေကလည်း ဈေးပေါ တော့ တော်တော်လည်းသောက်နေကြတယ်”ဟု တောင်ကြီးမြို့ခံတဦးက ပြောသည်။ တောင်ကြီးမြို့နှင့်အနီးတဝိုက်တွင် ဆင်နှင့် နဂါး တံဆိပ် ဘီယာများသာမက အခြားအမည်မျိုးစုံနှင့် တရုတ်ဘီယာအမျိုးအစား ၂ဝ ခန့် အလုံးအရင်းဖြင့် ဝင်ရောက်နေသည်မှာ နှစ်နှင့်ချီနေပြီဟု သိရသည်။
ဈေးကွက်ထိုးဖောက်ပုံမှာ ဈေးနှုန်းကို အခြားဘီယာများထက် သိသိ သာသာ ချထားသည့်အပြင် ကံစမ်းမဲ လှိုင်လှိုင်ပေးပြီး ဆွဲဆောင်ထား သည်။ လက်လီရောင်း ချသည့် ဆိုင်များအတွက်လည်း ကံစမ်းမဲ တ ဖာလဲ တိုင်းလဲတိုင်း ၆ဝဝ မှ ၈ဝဝ ကျပ်အထိ ပြန်အမ်းပေးသည်ဟု သိရသည်။ ကံစမ်းမဲကတော့ တော်တော်ပေါက်တယ်။ပြန်လဲရင်လည်း ကော်မရှင်ပြန်ပေးသေးတယ်။ ကျွန်မတို့က လာလဲတဲ့သူဆီက မဲတခုကို ၅ဝ ကျပ် ယူတယ်။ ကျွန်မတို့အတွက်တော့ ရောင်းရတာ အဆင်ပြေတယ်။ တရားဝင်လား၊ မဝင်လားတော့ သေချာမသိဘူး။ သူများတွေလည်း ရောင်းနေကြ တာပဲလေ”ဟု ဟိုပုံးမြို့နယ်မှ ကုန်စုံဆိုင်ပိုင်ရှင်တဦးက ပြောသည်။
ပအိုဝ့်တိုင်းရင်းသားလက် နက်ကိုင်များ ထုတ်လုပ်သည့်ဘီယာဟု အထင်မှားနေကြသည်။’ကျွန်တော်တို့နယ်ဘက်မှာလည်း တော်တော် များများသောက်ကြတယ်။ ပအိုဝ့်ရွာတွေဘက်က နဂါးဘီယာကို တော်တော်သောက်ကြတယ်။ တဘူး ၅ဝဝ ဆိုတော့လည်း အောက်ခြေ လူတန်းစားက သောက်ကြတာပေါ့။ ပြီးတော့ သူတို့လူမျိုးထုတ်တဲ့ ဘီယာလို့တောင် တချို့က ထင်နေကြတာလေ။ ကျွန်တော်လည်း အ စက ပအိုဝ့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ ထင်နေတာ။ ဒီကိစ္စကို လေ့လာစုံစမ်းပြီးတော့ ပြည်နယ် လွှတ်တော် မှာ မေးခွန်းမေးသွားဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်”ဟု ရပ်စောက်မြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးခိုင်ညီညီကျော်က ပြောသည်။
တဘူးကို ၅ဝဝ ရောင်းနိုင်ရင် ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်က ၂ဝဝ လောက်ပဲရှိမယ်။ ဘူးခွံဖိုးရှိမယ်။ သယ်ယူစရိတ်စရိတ်ရှိမယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့အ နေနဲ့ အခွန်မပေးရဦးဘဲထားဦး ကုန်ကြမ်းအမှန် သုံးနိုင်မှာ မဟုတ်လောက်ဘူး။ အရသာအတုလို ဓာတုဆေးတွေပဲသုံးကြမှာ ပေါ့” ဟု တောင်ကြီးမြို့ခံတဦးက ဆိုသည်။ဘီယာချက်လုပ်ခြင်းအဆင့်ဆင့်ဖြစ်သည့် မုယောစပါးကိုအညှောက်ဖောက်၍ ကစီဓာတ် မှ သကြား ဓာတ်ပြောင်းခြင်း၊ ပြီးနောက် တစေးဖြင့် ကစော်ဖောက်ခြင်း၊ ဗျစ်ပွင့်အခါးဓာတ်ဖြင့် ဘီယာအချိုအရသာကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဘူး၊ ပုလင်း သွတ်ခြင်း အစရှိသည့် စနစ်တကျ ဖြတ်သန်း၍ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဟုတ်၊ မဟုတ် စဉ်းစားကြည့်လျှင်ပင် သိရှိနိုင်ပါသည်။
ဘီယာဘူးပေါ်တွင်ပါရှိသည့် စာသားများမှာလည်း တချို့က အင်္ဂလိပ်၊ ထိုင်း၊ တရုတ် ဘာသာစုံ ဖြင့်ရေးသားထားသလို အချို့ဘူးများဆို လျှင် မြန်မာဘာသာ၊ တိုင်းရင်းသားဘာသာများဖြင့်ပါ ရေးသား ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဖြစ်ကတတ်ဆန်းထုတ် လုပ်ထားမှန်း ဘူးများ၊ ဖာများပေါ်တွင်ပါရှိသည့် စားလုံးပေါင်းသတ်ပုံအမှားများကို ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် သိနိုင်သည်။
ဈေးပေါပေါနဲ့ မွနျမာပွညျထဲ တစိမျ့စိမျ့စီးဝငျပွီး ကွီးထှားလာနတေဲ့ တရားမဝငျ တရုတျဘီယာဈေးကှကျ
တရုတျကတော့ မွနျမာပွညျသားတှကေို ဇီးရိုးဘတျဂကျြတိုး၊ တဈရှူးငှကျပြောကိစ်စမြားနညျးတူ အခုတခါလညျး ရိုးသားသော ကြေးလကျ က တိုငျးရငျးသားမြားကို နှားမရှံ့ပိတျဘီယာတံဆိပျ ကပျထားသညျ့အရညျမြားကို ထိုးရောငျးနကွေလပွေီ။ မညျသညျ့ပါဝငျပစ်စညျးမြားဖွငျ့ ထုတျလုပျထားမှနျးမသိသညျ့အရညျမြားကို သောကျသုံးနကွေပါပွီ။ နောငျသုံးလေးနှဈကွာသောခါ အမြိုးအမညျမသိ ဘယျလိုရောဂါဆနျး တှေ ခံစားကွရဦးမလဲဟု စဉျးစား နမေိပါသညျ။ဘီယာတဘူး ၅ဝဝ ကပျြ ‘ဖောကျ . . . ရှူး . . .”ကှငျးခြိတျအောကျမှာ “Free Beer” ဒါသညျ ဖွဈစခေငျြတဲ့ဆန်ဒဇောနဲ့ အိပျမကျမကျနခွေငျး မဟုတျ။
မွနျမာပွညျအရှတေ့လှားမှာ အမှနျတကယျ ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားဖှယျရာတှေ ဖွဈပျေါနပေါပွီ။ဘီယာတဘူးကိုမှ ငါးရာကပျြပဲပေး ရတဲ့အပွငျ တဘူးသောကျ တဘူးပေါကျကံစမျးမဲတှေ ဗုံးပေါ လအောပေးနတေယျဆို စာဖတျသူယုံခငျြမှယုံပါလိမျ့မယျ။ သို့သျော ဒီစာကို အခြိနျ ၅ မိနဈပေးပွီး အဆုံးထိဖတျကွညျ့ပါ။တောငျကွီးမွို့နှငျ့အနီးတဝိုကျတှငျ ဆငျနှငျ့ နဂါးတို့ အပေါငျးအပါတစုနှငျ့အတူ သောငျးကနျြး ခငျြ တိုငျး သောငျးကနျြးနကွေသညျဟု မိတျဆှတေဦးက ဖုနျးဆကျပွီးပွောတော့ အံအားသငျ့ခဲ့ရသညျ။ ဆငျနှငျ့နဂါးဆိုသညျမှာ တိရစ်ဆာနျမြားကို ဆို လိုခွငျးမဟုတျဘဲ တရုတျပွညျမှတရားမဝငျ ဝငျရောကျလာ သညျ့ဘီယာမြားကို ဆိုလိုခွငျးဖွဈ ကွောငျး မိတျဆှဖွေဈသူက ရှငျးပွသညျ။
ကှငျးဆငျး လလေ့ာခဲ့ရာတှငျ တောငျကွီးမွို့နှငျ့ အနီးတဝိုကျမွို့နယျ မြားဖွဈ သညျ့ ကလော၊ အောငျပနျး၊ ညောငျရှေ၊ ရပျ စောကျ၊ ဟိုပုံး၊ ဖယျခုံ၊ မိုးဗွဲမွို့နယျမြားအထိ တရုတျဘကျမှဝငျလာသညျ့ အမြိုးအမညျမသိ ဘီ ယာမြား ပြံ့နှံ့ နသေညျကို တှခေဲ့ရသညျ။ ဘူးမြားပျေါတှငျ တံဆိပျအမြိုးမြိုး၊ ဆငျ၊ ခွင်ျသေ့၊ နဂါး တိရစ်ဆာနျရုပျပုံ အမြိုးမြိုး ပါရှိသဖွငျ့ ဒေ သ ခံမြားက ဆငျ၊ နဂါး စသဖွငျ့ အလှယျချေါကွသလို တ ဘူးကို ၅ဝဝ ကပျြသာပေးရသဖွငျ့ ။အခြို့ကလညျး ”ငါးရာတနျဘီယာ”ဟု ချေါဆိုကွသညျ။ ထို တရားမဝငျဘီယာမြားသညျ တရုတျ-မွနျမာ နယျစပျကိုဖွတျ၍ တောငျကွီးမွို့ အထိ ၁၂ ဘီးကားကွီး မြားဖွငျ့ရောကျရှိလာပွီး ။
ဒသေတှငျးဖွနျ့ခြိခွငျးကို လကျခံဒိုငျနှဈဦး၊ သုံးဦးက လုပျကိုငျနခွေငျး ဖွဈသညျ။’အခုဆိုရငျ ဒီတရားမဝငျ တရုတျဘီယာတှကေ တျောတျော လေးပြံ့နပွေီ။ ၁၂ ဘီးကားတှနေဲ့ ပျေါတငျသယျနကွေတာ။ ၁၂ ဘီးကားတစီးကို ဖာ ၂၂ဝဝ လောကျပါတယျ။ တောငျကွီးမွို့မှာကို ဆိုငျရှေ့ တှမှော ဒီအတိုငျးပုံထားတဲ့ အခွအေနဖွေဈနပွေီ။ ရှာဘကျကလူတှကေလညျး စြေးပေါ တော့ တျောတျောလညျးသောကျနကွေတယျ”ဟု တောငျကွီးမွို့ခံတဦးက ပွောသညျ။ တောငျကွီးမွို့နှငျ့အနီးတဝိုကျတှငျ ဆငျနှငျ့ နဂါး တံဆိပျ ဘီယာမြားသာမက အခွားအမညျမြိုးစုံနှငျ့ တရုတျဘီယာအမြိုးအစား ၂ဝ ခနျ့ အလုံးအရငျးဖွငျ့ ဝငျရောကျနသေညျမှာ နှဈနှငျ့ခြီနပွေီဟု သိရသညျ။
စြေးကှကျထိုးဖောကျပုံမှာ စြေးနှုနျးကို အခွားဘီယာမြားထကျ သိသိ သာသာ ခထြားသညျ့အပွငျ ကံစမျးမဲ လှိုငျလှိုငျပေးပွီး ဆှဲဆောငျထား သညျ။ လကျလီရောငျး ခသြညျ့ ဆိုငျမြားအတှကျလညျး ကံစမျးမဲ တ ဖာလဲ တိုငျးလဲတိုငျး ၆ဝဝ မှ ၈ဝဝ ကပျြအထိ ပွနျအမျးပေးသညျဟု သိရသညျ။ ကံစမျးမဲကတော့ တျောတျောပေါကျတယျ။ပွနျလဲရငျလညျး ကျောမရှငျပွနျပေးသေးတယျ။ ကြှနျမတို့က လာလဲတဲ့သူဆီက မဲတခုကို ၅ဝ ကပျြ ယူတယျ။ ကြှနျမတို့အတှကျတော့ ရောငျးရတာ အဆငျပွတေယျ။ တရားဝငျလား၊ မဝငျလားတော့ သခြောမသိဘူး။ သူမြားတှလေညျး ရောငျးနကွေ တာပဲလေ”ဟု ဟိုပုံးမွို့နယျမှ ကုနျစုံဆိုငျပိုငျရှငျတဦးက ပွောသညျ။
ပအိုဝျ့တိုငျးရငျးသားလကျ နကျကိုငျမြား ထုတျလုပျသညျ့ဘီယာဟု အထငျမှားနကွေသညျ။’ကြှနျတျောတို့နယျဘကျမှာလညျး တျောတျော မြားမြားသောကျကွတယျ။ ပအိုဝျ့ရှာတှဘေကျက နဂါးဘီယာကို တျောတျောသောကျကွတယျ။ တဘူး ၅ဝဝ ဆိုတော့လညျး အောကျခွေ လူတနျးစားက သောကျကွတာပေါ့။ ပွီးတော့ သူတို့လူမြိုးထုတျတဲ့ ဘီယာလို့တောငျ တခြို့က ထငျနကွေတာလေ။ ကြှနျတျောလညျး အ စက ပအိုဝျ့တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့တှနေဲ့ပတျသကျတယျလို့ ထငျနတော။ ဒီကိစ်စကို လလေ့ာစုံစမျးပွီးတော့ ပွညျနယျ လှတျတျော မှာ မေးခှနျးမေးသှားဖို့ စီစဉျထားပါတယျ”ဟု ရပျစောကျမွို့နယျ ပွညျနယျလှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ဦးခိုငျညီညီကြျောက ပွောသညျ။
တဘူးကို ၅ဝဝ ရောငျးနိုငျရငျ ထုတျလုပျမှုစရိတျက ၂ဝဝ လောကျပဲရှိမယျ။ ဘူးခှံဖိုးရှိမယျ။ သယျယူစရိတျစရိတျရှိမယျ။ အဲဒီတော့ သူတို့အ နနေဲ့ အခှနျမပေးရဦးဘဲထားဦး ကုနျကွမျးအမှနျ သုံးနိုငျမှာ မဟုတျလောကျဘူး။ အရသာအတုလို ဓာတုဆေးတှပေဲသုံးကွမှာ ပေါ့” ဟု တောငျကွီးမွို့ခံတဦးက ဆိုသညျ။ဘီယာခကျြလုပျခွငျးအဆငျ့ဆငျ့ဖွဈသညျ့ မုယောစပါးကိုအညှောကျဖောကျ၍ ကစီဓာတျ မှ သကွား ဓာတျပွောငျးခွငျး၊ ပွီးနောကျ တစေးဖွငျ့ ကစျောဖောကျခွငျး၊ ဗဈြပှငျ့အခါးဓာတျဖွငျ့ ဘီယာအခြိုအရသာကို ထိနျးခြုပျခွငျး၊ ဘူး၊ ပုလငျး သှတျခွငျး အစရှိသညျ့ စနဈတကြ ဖွတျသနျး၍ ထုတျလုပျထားခွငျးဟုတျ၊ မဟုတျ စဉျးစားကွညျ့လြှငျပငျ သိရှိနိုငျပါသညျ။
ဘီယာဘူးပျေါတှငျပါရှိသညျ့ စာသားမြားမှာလညျး တခြို့က အင်ျဂလိပျ၊ ထိုငျး၊ တရုတျ ဘာသာစုံ ဖွငျ့ရေးသားထားသလို အခြို့ဘူးမြားဆို လြှငျ မွနျမာဘာသာ၊ တိုငျးရငျးသားဘာသာမြားဖွငျ့ပါ ရေးသား ထားသညျကို တှရေ့သညျ။ ဖွဈကတတျဆနျးထုတျ လုပျထားမှနျး ဘူးမြား၊ ဖာမြားပျေါတှငျပါရှိသညျ့ စားလုံးပေါငျးသတျပုံအမှားမြားကို ကွညျ့ရှုခွငျးဖွငျ့ သိနိုငျသညျ။